Tag: nharembozha | Martech Zone
Salonist Spa uye Salon Management Platform: Kugadzwa, Inventory, Kushambadzira, Kubhadhara, uye Zvimwe
Salonist isoftware salon iyo inobatsira spa uye salons kubata mubhadharo, kubhadharisa, kuita vatengi vako, uye kushandisa nzira dzekutengesa. Zvimiro zvinosanganisira: Kugadzwa Kugadzwa kweSpas uye maSalons Online Kubhuka - Uchishandisa smart Salonist Online kubhuka software, vatengi vako vanogona kuronga, kurongedzazve, kana kukanzura kugadzwa chero kwavari. Tine zvese zvewebhusaiti neapps zvinokwanisa kubatanidzwa neFacebook ne Instagram magariro enhau. Nezvo, iyo yakazara nzira yekubhuka izere
Lumavate: A Low-Code Mobile App Platform yeVashambadzi
Svondo, June 21, 2020 Svondo, June 21, 2020 Douglas Karr
Kana usati wanzwa izwi rekuti Progressive Web App, itekinoroji iyo iwe yaunofanirwa kunge uchiteerera. Fungidzira nyika inogara pakati peyakajairika webhusaiti uye nharembozha. Kambani yako inogona kuda kuve neyakaomarara, inoratidzira kupfuma kunyorera kuri kuita zvakanyanya kupfuura webhusaiti ... asi inoda kuregedza iyo mutengo uye kuomarara kwekuvaka application iyo inoda kutumirwa kuburikidza nezvitoro zveapp. Chii chinonzi Progressive Web Chikumbiro (PWA)?
Maitiro Ekuvandudza Nhare Yekutendeuka Mitengo Iine Dhijitari Wallets
China, May 28, 2020 China, May 28, 2020 Nina Ritz
Nhare dzekushandura nhare dzinomiririra huwandu hwevanhu vakasarudza kushandisa yako nhare mbozha / webhusaiti-yakagadziridzwa webhusaiti, kunze kwehuwandu hwevaya vakapihwa. Iyi nhamba inokuudza iwe kuti mushandirapamwe wako wakanaka sei uye, uchitarisisa ruzivo, chii chinofanira kuvandudzwa. Vazhinji vanobudirira e-commerce vatengesi vanoona purofiti yavo ichidzika zvakanyanya kana zvasvika kune vanoshandisa nhare. Yekutengera ngoro yekusiya mwero inoseka zvakakwirira kune nharembozha mawebhusaiti, uye ndizvo kana uri
Iyo Trends Yese Mobile App Inogadzira Inofanirwa Kuziva ye2020
China, January 23, 2020 China, January 23, 2020 Bobby Gill
Kwese kwaunotarisa, zviri pachena kuti nharembozha yave kubatanidzwa munzanga. Sekureva kweAllied Market Research, saizi yepasirese yemusika wepasi rose yakasvika $ 106.27 bhiriyoni muna 2018 uye inofungidzirwa kuti inosvika $ 407.31 bhiriyoni na2026. Iko kukosha kunounzwa neapp kumabhizimusi hakugone kudzikiswa. Sezvo musika wekufambisa unoramba uchikura, kukosha kwemakambani anoita vatengi vavo nharembozha kunowedzera zvakanyanya. Nekuda kwekuchinja kwe
China, November 22, 2018 Nitin Lahoti
Sezvo mafoni emuno masisitimu anoderedza nguva yekusimudzira uye kudzikisira pasi mari yekuvandudza, kunyorera nhare kuri kuve kunofanirwa-kuve nekambani zhinji kutyaira hunyanzvi. Kuvaka yako pachako nharembozha haina kana kudhura uye isinganetsi sezvo zvaingova makore mashoma apfuura. Kuita kuti indasitiri iyi ive makambani ekuvandudza mapurogiramu ane hunyanzvi hwakasiyana nzvimbo uye zvitupa, zvese zvine hukasha mukuvaka zvikumbiro zvebhizinesi zvinogona kukanganisa zvese zvebhizinesi rako. Sei Mapurogiramu eApp